Iphupha malunga nokuvuna Discover ➡ Discover online ▷ ➡️
Iwayini sisiselo senkcubeko kweli lizwe, isivuno sihlala sibhiyozelwa kunye nepati. Ukuvuna kuqala ngoSeptemba, iidiliya zokugqibela zivamise ukuvunwa ngoNovemba, kodwa ngamanye amaxesha kude kube ngoJanuwari. Ngokuvuna ngesandla ngokwesiko, iwayini lewayini lisika umdiliya ngamnye ngokwahlukeneyo kwaye lijonga umgangatho wawo. Nangona kunjalo, olu khetho lwenziwe kuphela ngeewayini ezikumgangatho ophezulu.
Ukuba indawo emqengqeleziyo yezidiliya iyavuma, oomatshini basetyenziswa nanamhlanje xa kuvunwa. Oku kwandisa imveliso kwaye kuvumela ixabiso elisezantsi lokuthengisa, kodwa ngeendleko zokukhetha amaqunube ngononophelo. Emva kokuvuna, iziqhamo ziyacocwa kwaye zicinezelwe. Okokugqibela, iwayini, iwayini ehlwahlwazayo okanye i-champagne yenziwe ngomdiliya kufuneka.
Ukuba umntu uphupha iidiliya, banokuyonwabela iwayini yokuqala encinci yonyaka kumnyhadala wewayini. Kungenzeka ukuba yena ngokwakhe uzama ukuvuna iidiliya ephupheni kwaye uzive uxinzelelo lwalo msebenzi. Ukutolikwa kwamaphupha, ukuphupha kufuneka kuthathele ingqalelo nokuba umsebenzi okanye ukonwaba kuxhomekeke kulo mqondiso wephupha.
1 Uphawu lwephupha «Vintage» - Ukutolikwa ngokubanzi.
2 Isimboli yephupha "Vintage" - ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «iidiliya» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «Vintage» - Ukutolikwa ngokubanzi.
Kungenxa yokuba isimboli yephupha "lokuvuna" likwinkcazo yamaphupha omabini amanqanaba okonwaba kunye nawomvuzo omnye. umzamo ebalulekileyo. Ibandakanya uvuyo apho iphupha lifumana khona umsebenzi okanye umsebenzi kubomi bokwenyani. Iphupha elo libonisa ulonwabo lomsebenzi ngokwawo kunye nethemba lokungahambi kakuhle mpu melelo uzothweswa isithsaba.
Ukutolikwa kwamaphupha, uphawu lwephupha lukwangumqondiso wozuko, ukuchuma kunye Suerte. Iphupha lokuvuna linokubonisa isidingo sephupha lokwamkelwa kunye nokuwongwa ngempumelelo yalo.
Ukongeza, ekutolikeni amaphupha kunye nesimboli yamaphupha, «iidiliya» ukuhlalisana kunye ukonwaba ngokwenyama idityanisiwe. Utywala kwiwayini bunokukhulula ingqondo kuthintelo lwentlalo kunye nokukhuthaza ukucinga kunye nobuchule. Ngokunokwenzeka umphuphi ulangazelela ebomini bokwenyani ukukhulisa amandla akhe ngendlela engaqhelekanga.
Kwakhona kubalulekile ukutolikwa kwamaphupha ngumbuzo wokuba isivuno siya kuphuma njani. Ukuba isivuno ephupheni sivelisa isivuno esihle, uphawu lwephupha luthembisa ukhuseleko lwentlalo kunye nolwaneliseko lweemvakalelo. Isivuno esibi, nangona kunjalo, silumkisa ngamaphupha enzondo, kunye nabantu abafuna ukuwasebenzisa.
Isimboli yephupha "Vintage" - ukutolikwa kwengqondo
Kutoliko lwengqondo ngokwamaphupha, uphawu lwephupha "lokuvuna" lubonisa uvuyo lwenkanuko kwaye Amandla obomi. Xa ulele, ukuqonda kwenyama kuyaqina kwaye kuyaziwa. I-subconscious ikwavumela ukudibana nomxholo ongazi nto ngengqondo nangokomoya kunye nophawu lwephupha. Ukuphupha amava ngokunxibelelene nokuvuna izinto zobugcisa, ezentelekelelo kunye nezeengqondo.
Ukuba iwayini esulungekileyo ithululelwa ephupheni, ke uphawu lwephupha "iidiliya" kutoliko lwephupha kukwasisimemo sokunye ukunyaniseka qonda kubomi bokwenyani. Ukuphupha akufuneki kuzenze ngathi okanye kucinezele iimpawu zomlinganiswa.
Njengophawu lwephupha, iidiliya nayo ithembisa ukuqala kwenqanaba elitsha lobomi. Ixesha elinxulumene noko, ekwindla, limele ekuchazeni amaphupha ngobusuku bobomi iphupha elilungiselelwe bona. Ngobuchule uyayinxibelelanisa nokuzaliseka kweminqweno oyifunayo njengomvuzo wezo ziganeko Impumelelo yoBomi.
Ukongeza, uphawu lwephupha "lokuvuna" luphawu lwamandla abalulekileyo asephupheni. Ngokwenkcazo yamaphupha, i-subconscious yakho ikuxelela ukuba ungayisebenzisa kwaye uyisebenzise kwiiprojekthi zobomi bexesha elizayo.
Uphawu lwephupha «iidiliya» - ukutolika kokomoya
Isivuno luphawu oluphuphileyo lokuchuma kunye kwinqanaba eligqithisileyo Intabalala, apho ubuthongo buthola khona amandla okomoya.
Ukutolikwa kwamaphupha, ukuvuna iidiliya kudala ubudlelwane kunye nobuthixo, iwayini ifanekisela utshintsho kwizinto eziphathekayo ukuya kokomoya.